Chaịniizị Anụmanụ Anụmanụ nke China Charmlite na Mpempe akwụkwọ, Cute Ice cream Mug Food Grade na ndị na-eweta ya | Charmlite
Anụmanụ ụmụ anụmanụ nke Charmlite Cartoon 3D, na-eji aka nri, Cute Ice cream Mug Food Grade
Nlele Nke: CL-IM001
Ikike iko ihe ngosi a nke anime 3D bu ihe agha 300ml. A na-eji iko dị n'ime iko PP eme ihe, a na-eji vinyl mee ihe anụ ụlọ (PVC). Ha bụ onyinye dị ukwuu maka ụmụaka. A nabatakwa nke ọma na ogige ntụrụndụ maka ice cream. Ndị ahịa nwere ike ịme ụdị 3D ha dị iche iche. Dị ka ime arụsị arụsị. Ndị ahịa chọrọ ịkwụ ụgwọ maka arụsị ahụ. Ọ bụghị iko. Oge ọrụ dị ihe dị ka ụbọchị 25-30.
Onye na-emepụta: Festime Plastic
Ebu dị: 100+ anụmanụ dị iche iche
Anụmanụ ndị ahụ dị ndụ.
Achịcha na ice cream nke ụmụ gị dị na akwụkwọ nkịtị ma ọ bụ akpa plastic? Gini mere anwale iko umu anumanu 3D nke mara mma? Nri ga-abawanye ụba na akpa a! Mụaka nwere ike ịhọrọ ụmụ anụmanụ kachasị amasị ha, dịka duck odo, agụ iyi, ụcha anụnụ anụnụ, nnụnụ na-ewe iwe, wdg.
Nke kachasị, ime n'ime akpa a bụ nke PP, nke bụ ọkwa nri na enweghị BPA n'efu. Ọ dị mma ụmụaka. Umuaka nwere ike iji ha n’echegbu onwe ha.
Anyị nwere ike ịme agba ahaziri iche maka iko insider, acha anụnụ anụnụ, isi awọ, ọbara ọbara, odo, acha ọcha dị ka uche gị. Naanị gwa anyị pantone agba gị.
Ihe a na-eme bụ vinyl (PVC), nke nwekwara ike ịgafe ule ọkọlọtọ Europe.
Pls nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu foto ndị ọzọ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe gị.
Ọ bụrụ n’ị mepụta atụmatụ nke gị, anyị ga-eziga ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke iko iko dị n’ime. Mgbe ahụ ị nwere ike chepụta arụsị nke gị na faịlụ 3D. Anyị ga-eme ezigbo nyocha 3D maka ihu ọma gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-agbanye na ezigbo akpụ. Ọ bụrụ na ihe niile zuru oke, anyị ga-aga n’ihu imepụta nri. Oge a na-eji etinye ngwá ọrụ bụ ihe dị ka ụbọchị 30 mgbe nkwado nke imewe gasịrị.
Nke gara aga: Charmlite Tumbler Ọhụrụ Ndị Na-ekpo ọkụ Ma Ihe Ọ andụ Hotụ Na-ekpo ọkụ ma Oyi 16 Ounce - BPA n'efu
Osote: Charmlite Recyclable plastic Mason Cocktail Cup, Shatterproof na BPA na-arinụ mmanya na-enweghị mmanya.
Bamboo Faber Ice ude Mug